Xiddiga Ay Manchester United Dayacday Ee Uu Rio Ferdinand La Doonayo Liverpool - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaXiddiga Ay Manchester United Dayacday Ee Uu Rio Ferdinand La Doonayo Liverpool
Xiddiga Ay Manchester United Dayacday Ee Uu Rio Ferdinand La Doonayo Liverpool
Halyeyga Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa usoo jeediyey Liverpool in ay si fiican uga faa’iidaysato suuqa iibka ciyaartoyda ee soo socda, isla markaana ay u dhaqaaqdo saxeexa weeraryahan ay Manchester United iska lumisay fursad fiican oo ay kula saxeexan karaysay.
Liverpool ayaa la filayaa inay suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaaga ay galaangal ka samayso, iyadoo dhinaca kalena ku dedaalaysa inay sii haysato xiddigaheeda waaweyn.
January 2020, Manchester United ayaa heshay fursad dahabi ah oo ay kula saxeexan karaysay weeraryahanka reer Norway ee Erling Haaland oo ay lacag jaban ku heli lahayd, hase yeeshee markii ay ka warwareegeen waxa uga hormartay Borussia Dortmund oo ku qaadatay 20 milyan oo Euro oo kaliya.
Sidaas oo ay tahay, laacibkan ayaa xagaaga soo socda waxa heshiiskiisa Borussia Dortmund lagu burburin karayaa €75 milyan oo Euro, waxaana danaynaya inay fursaddaas ka faa’iidaystaan kooxo ay ka mid yihiin Real Madrid, Manchester City iyo Manchester United.
21 jirkan oo 69 ciyaarood oo uu u saftay Borussia Dortmund u dhaliyey 69 gool, waxa la rumaysan yahay in uu doonayo inuu tago koox guulo kasoo hoyn karaysa tartanka Champions League oo ay kooxdiisa Borussia Dortmund kaga hadhay wareegga Group-yada.
Rio Ferdinand ayaa rumaysan in Erling Haaland ay faa’iidada ugu badan ka heli lahayd kooxda horyaalka Premier League ee Liverpool, waxaanu Jurgen Klopp usoo jeediyey inuu saxeexa laacibkan ka shaqeeyo, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in ay jiraan kooxo kaga habboon Manchester City oo uu ku soo baxayo. Haddii aan ahaan lahaa Liverpool, hadda ayaan u dhaqaaqi lahaa saxeexiisa.
“Haddii uu tago Liverpool, waxay heli doonaan saddex burburiye. Ilama aha inay ku adkaanayso inuu la qabsado haddii uu tago Liveprool. Waxay leedahay qaab ciyaareed ka duwan.”